Kedu uru m ga-ahụ ma ọ bụrụ na m zụta Udiri YouTube?
Na emezi nkwenye iji gbalite uto Organic.
Na-agba ndị ọzọ ume ka ha na-emekọrịta ihe na ihe onyonyo gị.
Speedsọ nnyefe: 200 ka 800 nwere mmasị na kwa ụbọchị.
Nsonaazụ na-amalite na awa 24-72 & gaa n'ihu ruo mgbe ha mechara.
Gbasaa ihe mmasị gafee ọtụtụ vidiyo (Min. 100 nwere mmasị na vidiyo). Dezie mmasị 500 & kewaa vidiyo 1 na 5.
Kedu ihe kpatara ị ga - eji zụta YouTube ka enwere mmasị na ya?
Gịnị ka ọtụtụ ndị mmadụ na-ele mgbe ha hụrụ vidiyo na YouTube; na-amasị, na-enweghị mmasị na kwuru, njikọ, echiche na ndị debanyere aha. Ihe ndị a niile na-ekpebi ihe ogo ogo ogo YouTube bụ ihe ga - eme onye ọrụ ahụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ ikiri vidiyo ahụ ma ọ bụ gfee ya. Tụghị egwu ị bulite vidiyo taa wee bido ịnwe ọtụtụ narị dịka ị na-aga. Ọ bụ ya mere ịkwesịrị ịzụta mmasị YouTube maka vidiyo gị ma dịka onye mbido ma ọ bụ dị ka pro. Ọbụna ihe kachasị mma nke ndị na-ede blọgụ ga-ajụ gị ka amasị vidiyo ha mgbe ị lechara. Ugbu a, ka m kọọrọ gị mkpa ịdị n'otu YouTube dị.
Ndepụta YouTube: YouTube, ọ bụ ezie na ọ na-achọ naanị ya; Ọ bụ ọkwa nke abụọ kachasi mma n'ụwa. Nke a bụ n'ihi na ọ na-eji usoro algorithm emepụtara iji wepụta vidiyo ndị na-ewu ewu ma dị mkpa na onye ọrụ ọ bụla. A na-ahọrọ vidiyo kachasị elu na nsonaazụ ọchụchọ. Njikarịcha YouTube dabere na mmasị na njikọ aka. Yabụ na o ziri ezi ikwu na vidiyo ọkacha mmasị karịa ya na aka ọ ga - eme ọkwa dị elu.
Ikesa Mmalite Nke a bụ ihe na-eme vidiyo na-aga efegharị. Mgbe onye ọrụ YouTube hụrụ vidiyo nwere puku kwuru, enwere ọchịchọ ebumpụta ụwa ịchọ ịkekọrịta igwe onyonyo ndị ọzọ na-elekọta mmadụ. Nke a na - eme ka ndị na - ege ntị ọhụrụ.
Iji Gbochie ulgha Egwuregwu: Nhọrọ dị ka bọtịnụ 'adịghị amasị' dị ka ebumnuche. Onye ọ bụla enweghị ike ịmasị vidiyo gị, nke bụ eziokwu doro anya. Vidio nke nwere ọtụtụ ihe na-enweghị mmasị enweghị ike iweghachi. Mgbe ịzụrụ mmasị maka vidiyo ọhụrụ gị, ọ na-enye vidiyo ahụ ka ọ guzosie ike ka mkpọsa ọ bụla na-ezighi ezi megide vidiyo ahụ ga-abụ nke na-adịghị mma.
Echiche: Usersfọdụ ndị ọrụ ga-enwe mmasị na ọtụtụ mmasị, n'ihi na ha chere na vidiyo ahụ bara uru. Mgbe ọkacha mmasị na-amasị na-enweghị mmasị doro anya, ndị ọrụ ga-achọ na-ekiri na vidiyo. Mmeghachi omume nke ndị na-ekiri ihe gara aga ga-ebido onye ọrụ ọhụụ ịchọ itinye aka na vidiyo ahụ. Yabụ iji nwetakwu ndị mmadụ itinye aka na vidiyo gị, a gwara ya ka ọ zụta amasị maka ya, iji wee bulie ogo na njikere onye ọrụ chọrọ ilele.
Ugbu a, ị hụla mkpa YouTube nwere mmasị na etu o si dị mkpa maka uto nke ọwa gị. Yabụ na ọ dị mma ikwu nke ahụ, ịzụta ihe ndị na-amasị YouTube bụ ezigbo ụzọ dị mma iji bulie ọwa gị.
All nyiwe igwe na-elekọta mmadụ na-eji bọtịnụ yiri ya. I nwere ike ịjụ, gịnị mere o ji dị mkpa? Bọtịnụ a na-eme ka onye ọrụ nwee nghọta na ịchọrọ ịma mmeghachi omume ha dị mma. Vidio ndị nwere mmasị karị ga-anata nlele, itinye aka na nlebara anya. Yabụ, a na m agba gị ume ka ị tụfuo echiche ahụ ịgwa gị ka ichere maka ụdị okike. Zụta YouTube nwere mmasị na taa ma nye vidiyo gị nke chọrọ nkwalite iji gaa malitere ịrịa.
Achọrọ m karịa karịa 30,000 YouTube amasị. Can nwere ike ịnye karịa?
Ee, anyị nwere ike ịnapụta ihe karịrị 30,000 YouTube amasị!
Anyị na-enye 30,000 YouTube nwere mmasị dịka ọnụọgụ kachasị mmadụ nwere ike ịzụta na ibe a maka ọtụtụ ebumnuche, mana ọ nweghị onye metụtara ikike anyị ịnapụta ha. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta karịa 30,000 YouTube nwere mmasị, anyị nwere ike ịnapụta ha, mana ọ ga-adị oke ọnụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụ karịa karịa 30,000 YouTube amasị, biko kpọtụrụ anyị ma kọwaa ọnụọgụ ị nwere mmasị na ịzụta. Anyị ga-azaghachi na ọnụahịa ọdịnala.
Mgbe ịzụrụ YouTube na-amasị anyị, nsonaazụ ga - ebido na-egosiputa na vidiyo gị n'ime awa 24-72 mgbe edobere ihe gị wee pụta nsonaazụ ya kwa ụbọchị.
Anyị na-ebugharị na ọsọ nke ihe dị ka 200 na 800 nwere mmasị na kwa ụbọchị. Dịka nsonaazụ, ọ bụrụ na ị nyere iwu 1,500 nwere mmasị, ị nwere ike ịtụ anya na ọ ga-ewe awa 72 iji bido wee mezie ụbọchị 2 na 4 iji nyefee zuru ezu.
Ọ bụrụ na ị na-enwekwu mmasị ịzụta, ọ ga-ewe gị oge iji nyefee ihe gị n'usoro.
Ọ bụrụ na inye iwu buru oke ibu ma chọọ ka anapụta ha ọsọ ọsọ, kpọtụrụ anyị, anyị ga - eme ka ị mara ma nnyefe ngwa ngwa ga - ekwe omume.
Agbakwunyela YouTube mmasị gị na ụgbọ ibu gị.
100 mbak ($ ​​10) 250 mbak ($ ​​20) 500 mbak ($ ​​30) 1000 mbak ($ ​​50) 2000 mbak ($ ​​80) 5000 mbak ($ ​​130) 10000 mbak ($ ​​250)